Fardaha lagu ciyaaro, waxaan ka hadlaynaa moodooyinka ugu qiimaha badan | Fardaha Noti
Fardaha lagu ciyaaro ayaa ka mid ahaa alaabta lagu ciyaaro ee caadiga ah. Waxaa jira guryo badan oo lahaa mid ka mid ah kan ugu yar guriga.
Weli wax badan baan idhaahdaa dad waaweyn oo badan ayaa doorta inay dhigaan faras ruxruxa alwaax gees ah muuqaalka qurxinta ee gurigaaga. Qaabkan waxay u keenaan diirimaad qol ay ugu mahadcelinayaan qoryaha iyo qaababka fardaha.
Miyaynu aragnaa kuwa ugu fiican ee imika lagu qiimeeyo qalabkaas carruurtu ku ciyaarto ee jiilalka la socday?
Waxaan wajaheynaa tooy dhaqameed taas muddo ayey isu beddeshay. Si kastaba ha noqotee, weli muhiimad ahaan waa ruxitaan ama rogid toy loogu talagalay in carruurta fuulaan. Carruurta yaryari waxay ku raaxaystaan ​​mala awaalka tartanka faraska, cayrsashada ama wakhti uun ku nasanaya 'socod'.
Intaa waxaa dheer, noocan ah fardaha ruxmada ama giraangiraha, waxaan leenahay tooygii faras ka kooban a faras cufan ama alwaax madaxa saaran ul. Ushaani waa waxa ay carruurtu dhex dhigaan lugaha dhexdooda si ay ugu raacaan adduunyo badan oo fantastik ah oo maskaxdooda ku dhex nool. Faa’iidada toy-gan ayaa ah in carruurtu qaadan karaan meel kasta inuu ciyaaro. Aragtida ayaa noqon doonta tan ugu xaddidan arrintan.
Aan aragno hadda kuwaas oo ah moodooyinka ugu wanaagsan ee lagu qiimeeyo xilligan. Si aad u sameyso liiskan, waxaan dooranay qiimeynta ay bixiyeen isticmaaleyaasha Amazon.
1 Moodooyinka maanta lagu qiimeeyo
2 Fardaha alwaax
2.1 Shirkad cag yar ah Seesaw
2.1.1 Pintoy 60.09535 - Faras ruxmaya oo alwaax ah
2.2 Fardaha alwaaxda iyo dharka (nooca cufan)
2.2.1 Knorrtoys 40502 Sonkor - Rocking faras
2.2.2 Famosa Softies Rocking Faras wata giraangiraha iyo Dhawaaqa 760013062
2.3 Socodka fardaha usha
2.3.1 Knorr 40100 Hip Hop Toy Faraska Madaxa leh Cod
2.4 Fardaha caaga ah
2.4.1 Ilmaha Clementoni Disney Rocking Horse
Moodooyinka maanta lagu qiimeeyo
Markaad dooranayso toy arrimo badan waa in lagu xisaabtamo, da'da ilmaha waa kan ugu weyn iyaga. Ama hadday tahay qurxin halkaas oo fardaha alwaaxa lagu qurxiyey rinjiga oo lagu qurxiyay ama aan ku xirnayn midba midka kale dhadhankiisa.
Qodobkaan waxaan ku arki doonnaa fardo cufan oo cufan oo loogu talagalay kuwa yaryar, xitaa caaga iyo fardaha alwaaxa.
Liistada looma dalbanin tan ugu fiican illaa tan ugu liidata, laakiin waa isku duubnaan amar la'aan.
Halkan waxaan ku arki doonnaa moodooyinka ugu caansan ee toy-da oo wali la casriyeeyay. Kuwani waa ku habboon yihiin in loo isticmaalo qurxin iyo sidoo kale inay ku habboon yihiin carruurta.
Shirkad cag yar ah Seesaw
Waxaan wajaheynaa nooc ka mid ah kuwa ugu caansan, alwaax lagu qurxiyey rinji iyo varnish. Faa'iidada dhagaxan ayaa ah inuu leeyahay kursi leh gadaal dambe oo ka ilaaliya ilmaha inuu dhaco. Qaabka skate skate-ka aad ayuu ugu fiican yahay qofka weyn inuu awoodo inuu isku dheelitiro ilmaha cagtiisa.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato caruusaddan waxaad ka arki kartaa halkan:shirkadda lugta yar ee Seesaw Horse.
Pintoy 60.09535 - Faras ruxmaya oo alwaax ah
Waxaan mar kale ka horreynaa faras kursi leh oo ka ilaaliya dhicitaanka. Sidoo kale, xaaladdan, dhinaca barafka dhagaxa, wuxuu ku dhammaadaa joogsiyada bixiya xasilloonida.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato caruusaddan waxaad ka arki kartaa halkan: Pintoy 60.09535 - Faras ruxmaya oo alwaax ah
Fardaha alwaaxda iyo dharka (nooca cufan)
Moodooyinkan ayaa laga yaabaa inay ka mid yihiin kuwa loogu doorto carruurta da'da yar. Tan waxaa u sabab ah suufka u eg-baakadka ayaa si fiican uga ilaaliya kuuskuusyada iman kara in kuwa yaryari is siin karaan. Si kastaba ha noqotee, sidaan horay u aragnay, kuwa alwaaxda leh kursi iyo gadaal dambe waxay noqon karaan xulasho aad u wanaagsan badbaadada carruurteena. Sikastaba, Waxaa lagugula talinayaa in kuwa yaryar ay ku ciyaaraan qalabkan carruurtu ku ciyaarto markasta oo ay kormeeraan dadka waaweyn.
Knorrtoys 40502 Sonkor - Rocking faras
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato caruusaddan waxaad ka arki kartaa halkan: Knorrtoys 40502 Sonkor - Rocking faras
Famosa Softies Rocking Faras wata giraangiraha iyo Dhawaaqa 760013062
Faraskan marka lagu daro bixinta dhagxaanta suufka ah ee loo yaqaan 'plush' ee qaabka ugu badan ee lo'da, wuxuu leeyahay dhawaq.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato caruusaddan waxaad ka arki kartaa halkan: Softies Caan ah oo Ruxaaya Faras wata Lugaha iyo Dhawaaqa
Socodka fardaha usha
Sidii aan soo sheegnay bilowgii, kani waa tooyga ugu fiican ee carruurtaas jecel inay ku ciyaaraan waddada ama jecel inay caruurtooda ku qaataan.
Knorr 40100 Hip Hop Toy Faraska Madaxa leh Cod
Qaabkan ayaa leh shanqadh iyo ciinti taas oo u muuqata inay farxad gelineyso kuwa yar yar. Waxay sidoo kale dhammeeysaa bakooradda giraangiraha si ay uga dhigto mid raaxo leh in la isticmaalo.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato caruusaddan waxaad ka arki kartaa halkan: Knorr 40100 Hip Hop Toy Faraska Madaxa leh Cod
Fardaha caaga ah
Kuwani waxaa laga yaabaa inay yihiin kuwa ugu caansan kuwa caanka ah. Waxay u muuqataa, oo aan ku biirayaa ra'yiga, in xulashooyinka kor ku xusan ay ka qurux badan yihiin bilicdooda. Si kastaba ha noqotee, waxay badanaa bixiyaan waxyaabo kale oo iyaga ka dhigaya toy weyn.
Ilmaha Clementoni Disney Rocking Horse
Faa'iidada faraskani waa marka lagu daro faras iyo faras ruxitaan, Waa xarun waxqabadyo. Ku hadal Isbaanish, ka caawi barashada Ingiriisiga, xarfaha, nambarada. Sidaa darteed, waxay dabooleysaa baahiyo badan oo ciyaaro ah. Waa Ku habboon kuwa yaryar.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato caruusaddan waxaad ka arki kartaa halkan: Ilmaha Clementoni Disney Rocking Horse
Waxaan rajaynayaa inaad ka heshay maqaalkan sida aan u qoray oo aad ugu raaxaysatay fardaha carruurtu ku ciyaarto, ha ahaadeen kuwa yaryar ama adiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » kuwa kale » Fardaha lagu ciyaaro, waxaan ka hadleynaa moodooyinka ugu qiimaha badan